कतै जुत्ता चप्पल त बनिरहेको छैन तपाईको घरको गरिबीको कारण ? सही स्थानमा यसरी राख्नुहोस् – Khabaarpati
December 22, 2020 December 22, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on कतै जुत्ता चप्पल त बनिरहेको छैन तपाईको घरको गरिबीको कारण ? सही स्थानमा यसरी राख्नुहोस्
१. जुत्ता चप्पल सही स्थानमा राख्ने गर्नुहोस् :हामी वा अन्य परपाहुनाहरु बाहिरबाट आउँदा जुत्ता चप्पल एउटा सही ठाउँमा राख्ने गर्नुपर्दछ । जताततै छरपस्ट रुपमा जुत्ता चप्पल राख्नाले शत्रुहरुको भय हुने र अमंगलको प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
January 21, 2021 Khabar Pati